के के छ एमाले-माओवादी एकीकरणको ६ बुँदे घोषणामा ? (पूर्ण पाठ) | Alagdhar
घरBanner Newsके के छ एमाले-माओवादी एकीकरणको ६ बुँदे घोषणामा ? (पूर्ण पाठ)
के के छ एमाले-माओवादी एकीकरणको ६ बुँदे घोषणामा ? (पूर्ण पाठ)
ष्ट्रिय सभागृह काठमाडौँमा बिहीबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ।
काठमाडौँः नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने क्रममा राष्ट्रिय सभागृहबाट ६ बुँदे घोषणा गरिएको छ ।
यस घोषणापत्रलाई नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बाचन गरेर सुनाएका थिए । यो घोषणामा पटक पटकका संघर्षबाट प्राप्त अभूतपूर्व उपलब्धिलाई समृद्ध र सु-संस्कृत नेपाल निर्माण गरेर दिगो र युगिन महत्वको बनाउने संकल्प गरिएको छ ।
घोषणामा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्त र असंलग्नताका मान्यतामा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा पार्टी कटिबद्ध रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी नेकपा पारस्परिक समानाता, सम्मान र हितको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा छिमेकी लगायत विश्वका सबै देशहरुसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने मान्यतामा अटल रहेको पनि जनाइएको छ ।
अघिल्लो लेखमामुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘जनभावना’
अर्को लेखमागृहले माग्यो ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारको सूची